Ukulungiselela "Arcoxia" is a non-steroidal ejenti eqeda ukuvuvukala okuyinto kunemiphumela antipyretic kanye analgesic, kodwa futhi kuvimbela ukwakheka prostaglandins.
Umuthi ikhiqizwa ngesimo amaphilisi igobolondo oluhlaza camera, mass asebenzayo isithako esebenzayo etoricoxib 60, 90 noma 120 mg. Nezinsizasenzo aphume ashone magnesium stearate, microcrystalline cellulose, sodium croscarmellose, i-calcium hydrogen phosphate.
Izinkomba yokwamukelwa izidakamizwa 'Arcoxia'
Uphenyo odokotela batusa ukusetshenziswa ejenti osteoarthritis, i-rheumatoid arthritis, kanye ankylosing spondylitis. Imithi aqede ubuhlungu nokuvuvukala izimpawu of gouty sokuqaqamba kwamalunga oyingozi.
Izimo ekusetshenzisweni "Arcoxia" izidakamizwa
Ukusetshenziswa Guide kusho kubonisa unacceptability we imithi ngesikhathi kanyekanye kumiswa acinene polyposis, isifuba somoya bronchial, aspirin ukungabekezelelani. Hhayi Kunconywa ukuba isetshenziswe ezigulini nezinguquko erosive futhi esidalwa yizilonda emathunjini sibe ku lwamafinyila we isisu noma duodenum, cerebrovascular, noma ukopha emathunjini, futhi wamathumbu ukuvuvukala. Akuvunyelwe ukusebenzisa ithuluzi hemophilia nezinye kwezinso ekunqandeni, kwezinso ezinzima, inhliziyo noma ukungakhuli hepatic. Ukwelashwa nge ukulungiselela "Arcoxia 90" engamukeleki okwenziwe ngemva yenhliziyo ukuhlinzwa Umthambo dlula, izifo cerebrovascular kanye neuropathy lwemithambo izifo. Izimo zihlanganisa ukukhulelwa, ibele, futhi iminyaka engu-16. Musa thatha imithi uma hypersensitivity kuya izingxenye ezibhebheni.
Isikali nokuPhatha "Arcoxia" ukulungiselela
Izibuyekezo kunodokotela uthi mayelana nokusetshenziswa amaphilisi, okuyinto ozimele ukudla, izidakamizwa kumele zithathwe nge inani elincane amanzi.
Osteoarthritis iphathwa 60mg izindlela asebenzisa esisodwa ngosuku. Ngo-rheumatoid arthritis kanye ankylosing spondylitis kubalulekile ukusebenzisa 90 mg nomuthi njengoba kanye ngosuku. Ukuze ekwelapheni acute sokuqaqamba kwamalunga gouty ukuthatha 120 mg, futhi izinga reception akufanele bathathe izinsuku ezingaphezu kwezingu-8. Ukuze ubuhlungu, umthamo owodwa we-angu-60.
Imiphumela emibi 'Arcoxia' izidakamizwa
Nobufakazi ukukhombisa imiphumela amaningi omubi izidakamizwa. On the ingxenye isimiso sokugaya ukudla bungene ngokuvamile isicanucanu, dyspepsia, ukubuyisa, ubuhlungu epigastric, uhudo, ungase nokubhamuka, ukuvuvukala, kucinisa peristalsis. Ngaphezu kwalokho, ngezikhathi ezithile kungase kolwelwesi, esophagitis, ukuhlanza, izilonda mucosal isisu noma duodenum.
Isimiso sezinzwa iphendula amaphilisi ekhanda, ubuthakathaka, isiyezi, futhi ngezinye izikhathi zingaphazamisa bezibona ukunambitheka, ukuzwela, ubuthongo. Iziguli kuyagcinwa ukukhathazeka, ukucindezeleka, kungenzeka ukudideka futhi babone izinto ezingekho uma usebenzisa "Arcoxia" izidakamizwa. Izimpendulo futhi ukhombise okuvela angaboni kahle, tinnitus, conjunctivitis, inzululwane.
Phakathi ekwelapheni ukwehluleka kwezinso eba Ezimweni ezingavamile, okuyinto zimo izidakamizwa aluphumeleli. Ngezinye izikhathi kungase kube iguliswa izibhebhe senzo.
Senhliziyo futhi semithambo side effects azibonakali ngesimo yokucindezeleka okwandayo, kwenhliziyo izinguquko, iziyaluyalu kwegazi ebuchosheni, fibrillation atrial, isilethikusebenza singenzeka.
Ngenxa umphumela asebenzayo wezokwelapha kanye nenombolo ye-side effects, umuthi akufanele kuthathwe ngaphandle udokotela.